ललितपुर फाइनान्स लि. | गृहपृष्ठ
Home लगानी ललितपुर फाइनान्स लि.
on: January 01, 2010 लगानी
ललितपुर फाइनान्स लि.
वर्गीकरण : ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्था
मुख्य कार्यालय : लगनखेल, ललितपुर
स्थापना : २०५२ साल मङ्सिर
अध्यक्ष : मनोजबहादुर श्रेष्ठ
शाखा कर्यालय : २
संस्थापक : ५५ प्रतिशत
सर्वसाधारण : ४५ प्रतिशत
यो कम्पनी ललितपुर जिल्लामा निजीक्षेत्रको संलग्नतामा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको वित्तीय संस्था हो । यस कम्पनीका शेयर २०५५ असोज २ मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएको हो । यस कम्पनीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको छ । विगत २ वर्षआव ०६४/६५ र ०६५/६६ मा ५० प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गरेको यस कम्पनीले आव ०६६/६७ मा १० प्रतिशत नगद लाभांश तथा सोही अनुपातमा बोनस शेयर वितरण गरेको छ । विगतका २ वर्षको तुलनामा कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजीमा गरेको वृद्धिअनुसार मुनाफामा वृद्धि हुन नसकेपछि प्रतिफल केही कम भएको हो । फलस्वरूप, कम्पनीको प्रतिशेयर आय तथा मूल्य(आम्दानी अनुपातमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा यस कम्पनीले शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छैन ।
प्राविधिक विश्लेषणको औजार आरएसआईद्वारा यस कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयरको ट्रेण्डलाई विश्लेषण गर्दा अहिले आरएसआई रेखा ओभरवट जोनमा देखिएको छ । केही समय पहिला स्केल ८० सम्म पुगेको यसको आरएसआई रेखा अहिले स्केल ७० तिर उन्मुख रहे पनि सो तहले ओभरवटको अवस्था नै देखाएको छ । आरएसआई रेखाको सङ्केतअनुसार यो कम्पनीको शेयर घट्दो अवस्थामा देखिएको छ । २००७ को अप्रिल ९ देखि हालसम्मको शेयर मूल्यको चाललाई हेर्ने हो भने आरएसआई रेखा चारपटक ओभरसोल्ड जोनमा पुगेको छ भने तीनपटक ओभरवट जोनमा देखिएको छ । शेयर कारोबार पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुने र हाल मूल्य घट्दो अवस्थामा कारोबार भएकाले गर्दा यस कम्पनीको शेयर अझै घट्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसकारण यस कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहने लगानीकर्ताले ओभरसोल्ड बुलिश रिभसल प्याट्रनको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ भने विक्री गर्न चाहनेले आफ्नो आवश्यकताअनुसार निर्णयगर्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।
चालू आव ०६७/६८ को दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १७ करोड ८ लाख रहेको छ । साथै, चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ७३ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । सो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ६४ दशमलव १६ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको त्यही अवधिको तुलनामा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५० प्रतिशतले वृद्धि भएकाले मुनाफा बढेको अनुपातमा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल दर बढ्न नसक्ने देखिएको छ । तर, सोही अवधिमा कम्पनीको जगेडा कोष गत आवको भन्दा ८ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेर रू. १२ करोड ४० लाखमा सीमित भएको छ । साथै, निक्षेप सङ्कलन पनि २ दशमलव १८ प्रतिशतको वृद्धिसँगै हाल रू. १ अर्ब ९७ करोड पुगेको देखिन्छ । सो अवधिमा कम्पनीको लगानी भने १ सय ९० दशमलव ४४ प्रतिशतको उच्च दरमा वृद्धि भएर हाल रू. ८ करोड ८० लाख पुगेको छ । यसरी कम्पनीले लगानी विविधीकरणसहित वृद्धि पनि गरेकाले आगामी दिनमा यसको मुनाफामा वृद्धि हुने सम्भावना बढेको छ । सोही अवधिमा कम्पनीको ऋण प्रवाह भने ६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले कम भई हाल रू. २ अर्ब ९ करोडमा झरेको छ ।
विगतका केही वर्षहरूका यस कम्पनीका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू सकारात्मक अवस्थामा सुदृढ हुँदै गएका थिए । तर, हाल कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजीमा गरेको वृद्धिको अनुपातमा मुनाफा कमाउन नसकेकाले ती वित्तीय परिसूचकहरूमा केही कमी आएको छ, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा कम्पनीले प्रदान गर्ने प्रतिफल दर कमी हुने सम्भावना बढेको छ । यस कम्पनीको प्रतिशेयर आय अहिले रू. १९ दशमलव ६६ तथा मूल्य-आय अनुपात १६ दशमलव ५३ गुणा रहेको छ । यसअनुसार यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गरी रू. १ आम्दानी गर्नको लागी १६ दशमलव ५३ गुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, यसको किताबी मूल्य अहिले रू. १ सय ७२ दशमलव ५९ रहेको छ ।
यस कम्पनीको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा औसत रूपमा कमै कारोबार हुने गरेकाले लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा किन्न र बेच्नका लागि समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा आफूलाई चाहिएको समयमा उक्त कम्पनीको शेयरलाई सदुपयोग गर्न केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिन्छ । साथै, यस कम्पनीको शेयर मूल्यमा पनि कम उतारचढावको अवस्थाले गर्दा सट्टेवाजहरूले यसको शेयरमा लगानी गरी मुनाफा कमाउन सक्ने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ । गत मार्च २९ मा भएको अन्तिम कारोबारपश्चात् हालसम्म पनि यो कम्पनीको शेयर किनबेच भएको छैन ।